ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရပွီး ဆေးကုသမှုခံယူနရေတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဥျတငျဆကျသူ ဇျောဝငျးနိုငျ | Popular
September 29, 2020 Asian Fame
ကျွန်တော် ဖောင်ကြီး Q center မှာရောက်တာ ဒီနေ့နဲ့ဆို (၈)ရက်ရှိပါတယ်… ဒီမရောက်ခင်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ရောဂါခံစားမှုနဲ့ သတိပြုစရာတချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်______
-Covid 19 ရောဂါဖြစ်တဲ့ပုံစံကတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး ကွန်တော်ဖြစ်တာကတော့ဆိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ…အဖျားတက်၊မော၊ကြပ်တာပေါ့နော်…အနံ့ပျောက်ပြီးအဲဒါတွေစဖြစ်တာပဲ..အရင်လဲအဆုတ်မကောင်းတာအခံရှိတော့ မောတာ၊ကြပ်တာကို ပုံမှန်လောက်ပဲထင်တာ …လူကခေါင်းကလဲမာတော့ သက်သာသွားမှာဆိုပြီးကြိတ်ခံနေသေးတာ…ကျွန်တော်အကိုအကြီး Zaw Moe Hein ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ… သူက oxygen level တိုင်းတာတွေပို့ပေးပြီး တိုင်းကြည့်တော့ 90 အောက်ကျနေတာနဲ့ ပရဟိတကူညီရေးအသင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးညတွင်းချင်းဆေးရုံတက်လိုက်လို့ အခုလောက်အသက်ရှိသေးတာပါ လတ်တလောထိ oxygen level ပြည့်အောင်လုပ်နေရတုန်းပါပဲ!!
– အဲ့မှာပြောချင်တာနဲ့သတိပြုစေချင်တာရှိပါသေးတယ်…ဆေးရုံကနေ ဖောင်ကြီး Q Center အရောက်မသေရုံတမယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ😖
…ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ဆေးရုံက (စံပြဆေးရုံကြီး) ပါ… ဆေးရုံကို ည ၁၂ ကျော်လောက်ရောက်တော့ အဲကဆရာဝန်က စိတ်မရှည်သလိုနဲ့အရင်စစ်မေးပါတယ်။ သူမေးတာတွေဖြေပြီး oxygen levelတိုင်းတော့ 88 ဆိုတော့ oxygen ပေးစရာမလိုဘူးလုပ်ပြီး နေဖို့နေရာပေးပါတယ်… ပရဟိတကူညီရေးကားပေါ်မှာ oxygen ရှူခဲ့ရတော့ ပထမတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်… ပြီးတော့ သူတို့ချပေးတဲ့နေရာမှာoxyengမပါဘဲ* နေနေရင်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ထွက်ပြီး အသက်ရှူအရမ်းကြပ်လာလို့ပါ လို့ထွက်ပြောရပါတယ်..ဒါတောင်ထွက်လာလို့တဲ့အော် ငေါက်သေးတာ မထွက်လို့လဲလာကြည့်မယ့်လူတစ်ယောက်မှမရှိပဲနဲ့.😏 အဲ့ညကတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်..
-မနက်ကျ swab test စစ်ရပါတယ်…နောက်တစ်ရက်ကျ result ကတန်းသိရတာပါပဲ… Positive တဲ့ အခန်းထဲမှာ လူနာ (6)ယောက်ရှိတာ (4)ယောက် Positive ပါတယ်။ အဲ့မှာစတွေ့တော့တာပါပဲ Positive လဲဆိုတော့အကုန်ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် oxygen ကုန်လို့တောင်းလို့လဲခုလာမလိုလိုတော်ကြာလာမလိုလိုနဲ့လာကိုမလာတော့တာ… ရောဂါကူးမှာကြောက်တာစာနာပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလိုအ‌ခြေအနေမှာ covid လူနာတွေရောက်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီး system မလုပ်ထားတာလားဘာလားတော့မသိဘူး…တိုးချဲ့တွေလုပ်နေတာတော့အများကြီး..
အဲ့ဒီ စံပြဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေကော…ဆရာဝန်မတွေကော ဆေးကုဖို့ထက် ဆေးဖြန်းဖို့ပဲလုပ်နေကြတာဗျာ…အဲဒါဆိုလဲအိမ်မှာပဲနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ…
-ပြီးတော့ဖောင်ကြီးဖို့ပို့စီစဉ်ကြတော့တာပဲ အဲ့မှာစံပြဆေးရုံက တာဝန်ခံဆရာဝန်ကဖုန်းဆက်ပါတယ်… အဓိကဆက်တာ ဖောင်ကြီးကို information ပို့ဖို့နာမည်မေး၊ဘာမေးပေါ့ ကိုယ်ကလဲ oxygen ပိုက်ကဖြုတ်လို့ကိုမရတော့ အားကိုးတကြီးနဲ့ ‘ဆရာရယ် ကျွန်တော်အသက်ရှူကြပ်နေလို့ oxygen လေးရှူပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးပါအုံးနော်’ လို့အကူညီတောင်းရတာပေါ့… ရျွန်းရွှန်းဝေပြန်ပြောပါတယ် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်တဲ့!!
– ကိုယ်လဲစိတ်ချလက်ချပေါ့… ညနေလဲရောက်ရောကားရောက်ပြီ ထွက်တော့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တော့တာပါပဲ… အမယ်_ဒါမျိုးကျနောက်ကနေတောက်လျှောက်အုပ်လိုက်ကြီး လူ‌ခြေ‌ထောက်နားတွေထိပါဆေးဖြန်းပြီးလိုက်ပို့တာဗျာ!! ကိုယ်လဲသိတော့သိလိုက်တယ် ဘာ oxygen မှလဲရှူဖို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး… တော်တော်လဲအသက်ရှူကြပ်နေပီ…ကားမြင်တော့ပိုကြပ် YBS ကားပေါ်မှာ အကုန်လုံကိုစုပြီးဝက်တင်သလိုတင်ထားတာ ထိုင်စရာနေရာတောင်မရှိတော့ တင်စရာရှိတာတင်ပြီး မတ်တပ်လေးရပ်မှီနေပြီး စိတ်မလွှတ်သွားအောင် အသက်ကိုပုံမှန်ထိန်းပြီးမနည်းရှူနေရတယ် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေအရင်ကလုပ်ထားတာကိုလဲကိုယ့်ဘာသာကျေးဇူးတင်မိတယ်… ကံကောင်းချင်တော့အန်တီကြီးတစ်ယောက်က ကြပ်နေမှန်းသိလို့နေရာဖယ်ပေးလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးလိုက်လာရတယ် ဖောင်ကြီးကို…. oxygen level တိုင်းကြည့်တော့ 68 လောက်ဖစ်နေပီ!! မသေတာကံကောင်း…😫
-ဖောင်ကြီးနားရောက်တော့ Q Center ကတာဝန်ကျဆရာဝန်ကဖုန်းဆက်ပြီး ရောဂါအခြေနေကြိုမေးတော့ ကျွန်တော်အသက်ရှူကြပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောတော့…ဆရာဝန်ကအံ့ဩပြီး! ဘယ်လိုလိုက်လာလဲတဲ့? ဒီတိုင်းပဲလိုက်လာရတာလို့ပြောတော့…’ဒီဘက်ကိုလဲအသက်ရှူကြပ်တဲ့သူပါတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမကြားထားဘူးတဲ့’…
– ဖောင်ကြီးရောက်တော့ Center ထဲဝင်ဖို့ကားကအထဲထိမရောက်တော့ထိပ်ကနေလမ်းလျှောက်ရတယ်… အဝေးကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဆင်းလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ဘူး တလမ်းလုံးလည်းကြပ်လာတာဆိုတော့ ဟတ်ထိုးကိုလိုက်နေတာပဲ အသက်ကိုမနည်းရအောင်ပြန်ရှူရတာ…မျက်လုံးပါပြာပြီးသေပီထင်တာ…Center ထဲမနည်းအားတင်းဝင်ပြီး အထဲရောက်တာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေထိုးပေးပြီး လိုတာအကုန်လုပ်ပေးကြပါတယ်…
-Q center တွေကတော့ ဒီလူနာတွေအတွက် system ချထားပြီးသားဆိုတော့ နေရတာအဆင်တကယ်ပြေပါတယ်…ဆေးစစ်တာကအစသေချာလေးကို ဂရုစိုက်လုပ်ပေးပါတယ်… ကျေးဇူးလဲအထူးတင်ပါတယ်🙏
– ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လိုမဖြစ်ရအောင် အနံ့ပျောက်၊အဖျားအရမ်းတက်၊ကြပ်မောပြီဆိုရင် ဆေးရုံကို မြန်မြန်ကျော်ပြီး Q Center ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ပြေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်…(တခြားဆေးရုံတွေတော့မသိပါ စံပြဆေးရုံကြီးကတော့လှန့်သွားပါပီ)
– နောက်ပြီး ‌ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းမစိုးရိမ်ရဘူးထင်လို့ oxyen level ကျမကျသိချင်ရင်တော့ စက်လေးဆောင်ထားပြီးတိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်… Oxygen level 95 နဲ့ အထက်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါပဲ… 90-92 လောက်ဆို နေသာတယ်ဆိုရုံလေးပါ.. 90 အောက်ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူး။
အားလုံးပဲ အိမ်ထဲမှာကျန်းမာအောင်နေပြီး Covid19 ရန်ကင်းဝေးကြပါ‌စေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယျ
ကြှနျတျော ဖောငျကွီး Q center မှာရောကျတာ ဒီနနေဲ့ဆို (၈)ရကျရှိပါတယျ… ဒီမရောကျခငျကြှနျတျောတှကွေုံ့ခဲ့ရတဲ့ရောဂါခံစားမှုနဲ့ သတိပွုစရာတခြို့ကိုပွောပွခငျြပါတယျ______
-Covid 19 ရောဂါဖွဈတဲ့ပုံစံကတော့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူကွပါဘူး ကှနျတျောဖွဈတာကတော့ဆိုးတဲ့အထဲမှာပါတယျလို့ပဲဆိုရမှာပါ…အဖြားတကျ၊မော၊ကွပျတာပေါ့နျော…အနံ့ပြောကျပွီးအဲဒါတှစေဖွဈတာပဲ..အရငျလဲအဆုတျမကောငျးတာအခံရှိတော့ မောတာ၊ကွပျတာကို ပုံမှနျလောကျပဲထငျတာ …လူကခေါငျးကလဲမာတော့ သကျသာသှားမှာဆိုပွီးကွိတျခံနသေေးတာ…ကြှနျတျောအကိုအကွီး Zaw Moe Hein ကိုကြေးဇူးတငျရမှာပါပဲ… သူက oxygen level တိုငျးတာတှပေို့ပေးပွီး တိုငျးကွညျ့တော့ 90 အောကျကနြတောနဲ့ ပရဟိတကူညီရေးအသငျးကို ဖုနျးဆကျပွီးညတှငျးခငျြးဆေးရုံတကျလိုကျလို့ အခုလောကျအသကျရှိသေးတာပါ လတျတလောထိ oxygen level ပွညျ့အောငျလုပျနရေတုနျးပါပဲ!!
– အဲ့မှာပွောခငျြတာနဲ့သတိပွုစခေငျြတာရှိပါသေးတယျ…ဆေးရုံကနေ ဖောငျကွီး Q Center အရောကျမသရေုံတမယျဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးလေးပါ😖
…ကြှနျတျောသှားခဲ့တဲ့ဆေးရုံက (စံပွဆေးရုံကွီး) ပါ… ဆေးရုံကို ည ၁၂ ကြျောလောကျရောကျတော့ အဲကဆရာဝနျက စိတျမရှညျသလိုနဲ့အရငျစဈမေးပါတယျ။ သူမေးတာတှဖွေပွေီး oxygen levelတိုငျးတော့ 88 ဆိုတော့ oxygen ပေးစရာမလိုဘူးလုပျပွီး နဖေို့နရောပေးပါတယျ… ပရဟိတကူညီရေးကားပျေါမှာ oxygen ရှူခဲ့ရတော့ ပထမတော့နညျးနညျးသကျသာတယျ… ပွီးတော့ သူတို့ခပြေးတဲ့နရောမှာoxyengမပါဘဲ* နနေရေငျးမခံနိုငျတော့တာနဲ့ထှကျပွီး အသကျရှူအရမျးကွပျလာလို့ပါ လို့ထှကျပွောရပါတယျ..ဒါတောငျထှကျလာလို့တဲ့အျော ငေါကျသေးတာ မထှကျလို့လဲလာကွညျ့မယျ့လူတဈယောကျမှမရှိပဲနဲ့.😏 အဲ့ညကတော့ကောငျးကောငျးအိပျပြျောသှားပါတယျ..
-မနကျကြ swab test စဈရပါတယျ…နောကျတဈရကျကြ result ကတနျးသိရတာပါပဲ… Positive တဲ့ အခနျးထဲမှာ လူနာ (6)ယောကျရှိတာ (4)ယောကျ Positive ပါတယျ။ အဲ့မှာစတှတေ့ော့တာပါပဲ Positive လဲဆိုတော့အကုနျကွကျပြောကျငှကျပြောကျ oxygen ကုနျလို့တောငျးလို့လဲခုလာမလိုလိုတျောကွာလာမလိုလိုနဲ့လာကိုမလာတော့တာ… ရောဂါကူးမှာကွောကျတာစာနာပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအ‌ခွအေနမှော covid လူနာတှရေောကျရငျဘာလုပျမယျဆိုပွီး system မလုပျထားတာလားဘာလားတော့မသိဘူး…တိုးခြဲ့တှလေုပျနတောတော့အမြားကွီး..
အဲ့ဒီ စံပွဆေးရုံက ဆရာဝနျတှကေော…ဆရာဝနျမတှကေော ဆေးကုဖို့ထကျ ဆေးဖွနျးဖို့ပဲလုပျနကွေတာဗြာ…အဲဒါဆိုလဲအိမျမှာပဲနတောမဟုတျဘူးဗြာ…
-ပွီးတော့ဖောငျကွီးဖို့ပို့စီစဉျကွတော့တာပဲ အဲ့မှာစံပွဆေးရုံက တာဝနျခံဆရာဝနျကဖုနျးဆကျပါတယျ… အဓိကဆကျတာ ဖောငျကွီးကို information ပို့ဖို့နာမညျမေး၊ဘာမေးပေါ့ ကိုယျကလဲ oxygen ပိုကျကဖွုတျလို့ကိုမရတော့ အားကိုးတကွီးနဲ့ ‘ဆရာရယျ ကြှနျတျောအသကျရှူကွပျနလေို့ oxygen လေးရှူပွီးဖွဈဖွဈသှားလို့ရအောငျ စီစဉျပေးပါအုံးနျော’ လို့အကူညီတောငျးရတာပေါ့… ရြှနျးရှနျးဝပွေနျပွောပါတယျ စီစဉျပေးပါ့မယျတဲ့!!
– ကိုယျလဲစိတျခလြကျခပြေါ့… ညနလေဲရောကျရောကားရောကျပွီ ထှကျတော့ဆိုပွီးမောငျးထုတျတော့တာပါပဲ… အမယျ_ဒါမြိုးကနြောကျကနတေောကျလြှောကျအုပျလိုကျကွီး လူ‌ခွေ‌ထောကျနားတှထေိပါဆေးဖွနျးပွီးလိုကျပို့တာဗြာ!! ကိုယျလဲသိတော့သိလိုကျတယျ ဘာ oxygen မှလဲရှူဖို့ပွောလို့ရမှာမဟုတျတော့ဘူး… တျောတျောလဲအသကျရှူကွပျနပေီ…ကားမွငျတော့ပိုကွပျ YBS ကားပျေါမှာ အကုနျလုံကိုစုပွီးဝကျတငျသလိုတငျထားတာ ထိုငျစရာနရောတောငျမရှိတော့ တငျစရာရှိတာတငျပွီး မတျတပျလေးရပျမှီနပွေီး စိတျမလှတျသှားအောငျ အသကျကိုပုံမှနျထိနျးပွီးမနညျးရှူနရေတယျ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးတှအေရငျကလုပျထားတာကိုလဲကိုယျ့ဘာသာကြေးဇူးတငျမိတယျ… ကံကောငျးခငျြတော့အနျတီကွီးတဈယောကျက ကွပျနမှေနျးသိလို့နရောဖယျပေးလို့ ငွိမျငွိမျလေးထိုငျပွီးလိုကျလာရတယျ ဖောငျကွီးကို…. oxygen level တိုငျးကွညျ့တော့ 68 လောကျဖဈနပေီ!! မသတောကံကောငျး…😫
-ဖောငျကွီးနားရောကျတော့ Q Center ကတာဝနျကဆြရာဝနျကဖုနျးဆကျပွီး ရောဂါအခွနေကွေိုမေးတော့ ကြှနျတျောအသကျရှူကွပျနတေဲ့အကွောငျးပွောတော့…ဆရာဝနျကအံ့ဩပွီး! ဘယျလိုလိုကျလာလဲတဲ့? ဒီတိုငျးပဲလိုကျလာရတာလို့ပွောတော့…’ဒီဘကျကိုလဲအသကျရှူကွပျတဲ့သူပါတယျဆိုပွီးအကွောငျးမကွားထားဘူးတဲ့’…
– ဖောငျကွီးရောကျတော့ Center ထဲဝငျဖို့ကားကအထဲထိမရောကျတော့ထိပျကနလေမျးလြှောကျရတယျ… အဝေးကွီးမဟုတျပမေယျ့ ဆငျးလိုကျတာနဲ့ဘယျလိုမှမခံနိုငျတော့ဘူး တလမျးလုံးလညျးကွပျလာတာဆိုတော့ ဟတျထိုးကိုလိုကျနတောပဲ အသကျကိုမနညျးရအောငျပွနျရှူရတာ…မကျြလုံးပါပွာပွီးသပေီထငျတာ…Center ထဲမနညျးအားတငျးဝငျပွီး အထဲရောကျတာနဲ့ လိုအပျတဲ့ဆေးတှထေိုးပေးပွီး လိုတာအကုနျလုပျပေးကွပါတယျ…
-Q center တှကေတော့ ဒီလူနာတှအေတှကျ system ခထြားပွီးသားဆိုတော့ နရေတာအဆငျတကယျပွပေါတယျ…ဆေးစဈတာကအစသခြောလေးကို ဂရုစိုကျလုပျပေးပါတယျ… ကြေးဇူးလဲအထူးတငျပါတယျ🙏
– ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောလိုမဖွဈရအောငျ အနံ့ပြောကျ၊အဖြားအရမျးတကျ၊ကွပျမောပွီဆိုရငျ ဆေးရုံကို မွနျမွနျကြျောပွီး Q Center ကိုမွနျမွနျရောကျအောငျပွေးကွပါလို့ပွောခငျြပါတယျ…(တခွားဆေးရုံတှတေော့မသိပါ စံပွဆေးရုံကွီးကတော့လှနျ့သှားပါပီ)
– နောကျပွီး ‌ကိုယျ့ကိုယျကို အရမျးမစိုးရိမျရဘူးထငျလို့ oxyen level ကမြကသြိခငျြရငျတော့ စကျလေးဆောငျထားပွီးတိုငျကွညျ့လို့ရပါတယျ… Oxygen level 95 နဲ့ အထကျဆိုရငျပုံမှနျပါပဲ… 90-92 လောကျဆို နသောတယျဆိုရုံလေးပါ.. 90 အောကျဆိုရငျတော့မကောငျးပါဘူး။
အားလုံးပဲ အိမျထဲမှာကနျြးမာအောငျနပွေီး Covid19 ရနျကငျးဝေးကွပါ‌စဆေုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ